QAYBTII 4AAD EE XARAFKA UGU HOREEYA MAGACAAGA AYAA SHEEGAYA DABEECADDAADA IYO QOFKA AAD TAHAY - Haldoornews
QAYBTII 4AAD EE XARAFKA UGU HOREEYA MAGACAAGA AYAA SHEEGAYA DABEECADDAADA IYO QOFKA AAD TAHAY
Waxaanu si taxane ah akhristayaasha ugu soo gudbina doona dabeecadaha ay khubarada cilmigu bulshadu sheegeen in lagu garan karo qof kasta iyada oo la eegayo xarafka koowaad ee uu magaciisu ka bilowdo. Haddaba anagoo tixgelinaya akhristayaal xiisaynaya inay ogaadan magacyadooda iyo waxay daaran yihiin, ayaanu si taxana idinku kaga soo gudbin doona shabagada Haldoor news.com waana Qaybtii 4aad
Niifiin Abu Shaalah oo ah khabiir ku xeeldheer cilmifalagga oo u dhalatay dalka Lubnaan ayaa qoraal ay dhowaan faafisay oo ay kaga hadlaysay sida xarafka koowaad ee magaca qofku ka bilowdaa astaan ugu noqon karo dabeecaddiisa, marka ay la hadlayso qofka uu magaciisu ku bilowdo xarafkan aynu maanta soo qaadannay ee L waxa ay qortay, “Safar jacaylkaaga iyo guurguuritaanka aad xiisaysaa waxa ay saamayn ku yeesheen dabeecaddaada. Waxa aad xariif ku tahay hanashada qalbiyada dadka kale. Waxa aad tahay qof qalbi wanaagsan oo la jecel yahay, arrimahana dhinaca fiican ka eega. Laakiin ceebtaadu waa in aad tahay qof aad u xasaasiya”
Xeeldheerayaal kale oo ka hadlay shakhsiyadda qofka magaciisu L ku bilowdaana waxa ay ku tilmaameen, ruux kalgacal badan, dabeecaddiisu jacayl burqanayso, oo leh hab-dhaqanka afka qalaad lagu yidhaahdo Roomaansi, dadkana aad ugu soo jiita.Qofka uu nolosha la wadaagayo Afo ama say ayaa ah waxa uu muhiimadda koowaad ee noloshiisa siiyo. Waxa qof aan dhi
Niifiin Abu Shaalah oo sida aynu qormadii hore ku soo sheegnay ah khabiir u dhalatay dalka Lubnaan oo ku xeeldheer cilmifalagga ayaa qoraalkeedii ay ku faafisay boggeeda Facebook, marka ay ka hadlayso shakhsiyadda qofka magaciisu ku bilowdo M waxa ay tidhi, “Waxa aad tahay qof qalbigiisu ballaadhan yahay, laabtiisuna xaadhan tahay oo soo dhoweyn badan tahay. Haddii aad jeclaato waa kaa dhab oo run ayaa aad u jeclaataa. Waxa aad tahay ruux noloshiisa guulo ka gaadha, marka aad mawqif iyo xaalad adag taagan tahayna ma taqaanid dib u gurashada iyo calool jileeca”
Xeeldheerayaasha cilmifalaggu waxa ay tilmaamaaan in dadka uu magacoodu Xarafka M ku bilowdo lagu yaqaano shucuurta afka qalaad lagu yidhaahdo Roomaansi, oo mar walba doona ama raadiya jacayl iyo jawi iyo deegaan jacayl ku xeeran yahay. Waa dad khajilaad badan iyo in aanay kibir lahayn. Laakiin waa dad jecel dhamaystirnaanta, sidaa awgeedna ay adag tahay in ay si sahal ah wax ugu qancaan.
Dadkan waxaa inta badan dhalleeceeyaa in ay yihiin dad jecel naqdiga oo aad u dura wax kasta oo ay diidaan ama aan aragtidooda waafaqsanayn. Sidoo kale dadka aadka ula macaamila qofka magaciisu M ka bilowdaa waxa ay ka dareemaan in uu yahay qof naftiisa wax kasta la jecel ama ugu yaraan jecel in wax kasta uu isagu ku horumaro oo aan xiisayn in cid kale uu iska horreysiiyo, xitaa haddii uu yahay cid kalsooni iyo jacayl badan u hayo.
Waxa uu caan ku yahay dadaal iyo hawl karnimo, Inkasta oo uu yahay qof aan kaftanka iyo dheel-dheelka aqoon oo waaqici ah, haddan waxa lagu yaqaannaa in waxa uu doono uu yeelo, ma’aha in uu sameeyo wax aanu ku talo gelin oo gef iyo kama’ uu ugu dhaco balse waa badheedh fal kasta oo uu ku kacaa. Waa ay adag tahay in uu ku khamaaro ama galo arrin khatar ku keeni karta naftiisa iyo dantiisa. Waxa uu intii suuro gal ah iska ilaaliyaa in uu guuldaraysto ama khasaaro. Waxa lagu yaqaanna waxoogaa ad adayg ah. Waxa uu caan ku yahay in uu yahay qof ereyga iyo talada heli og. Waa qof inta badan ku dadaala in uu dadka ku dhiiri geliyo toosnaanta iyo akhlaaqda suuban. Ceebta ugu weyn ee magacani leeyahay waa in uu inta badan iska illaawi karo qoyska iyo saaxiibbadaba oo kelidii uu noolaan karo.
Barnaamijka Xisbiga Waddani Waa Badbaadada Qaranka qabyaaladu naafaysay
Waxaan Cambaaraynayaa Dhalinyarada ka Mudaharaaday Guurka Qaaliyoobay. Axmed Cali Diiriye